Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Andriy Yarmolenko Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Emelitere ikpeazụ January 27, 2020
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha na aha "The New Sheva“. Anyị Andriy Yarmolenko Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Andriy Yarmolenko Life Life- Nyocha
Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya mbụ & nzụlite ezinụlọ, agụmakwụkwọ & ọrụ mmepe, ndụ ọrụ mmalite, ụzọ iji wee mara akụkọ, ibilite na ama akụkọ, mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​ndụ ezinụlọ, ụdị ndụ wdg.
Ee, onye ọ bụla na-ahụ Yarmolenko dị ka onye na-agba bọl ụkwụ nke nwere anya maka ịme mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Andriy Yarmolenko nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Andriy Yarmolenko n'ụbọchị 23rd nke October 1989 na nne ya, Valentyna Yarmolenko na nna, Mykola Yarmolenko n'obodo ọdụ ụgbọ mmiri Russia na Saint Petersburg. Ọ bụ nwa mbụ n’ime ụmụaka abụọ amụrụ ọmarịcha obi-ụtọ ndị nne na nna na-ese n'okpuru.
Papa m na mama m na Andriy Yarmolenko nọ na-amụmụ ọnụ ọchị. Ekele diri IG
Ma nne na nna Andriy Yarmolenko bụ ndị Ukraine. Ha kpebiri ịmụ ụmụ ha n'obodo Saint Petersburg nke Russia. Ndị otu ezinụlọ Andriy Yarmolenko sitere na Kulykivka Raion, Chernihiv Oblast, Northern Ukraine. Ugbu a, ka anyị gwa gị ihe kpatara na nne na nna ya kwagara Russia.
Mgbe alụkwaghịm alụlụ dị n'etiti nne na nna ya, a nyere nne nne Andriy ọrụ na-enye ezigbo ego n'obodo Saint Petersburg n'ọdụ ụgbọ mmiri Russia. O kpebiri ịhapụ di ya lụrụ ọhụrụ na Ukraine gaa biri na Russia. N'oge na-adịghị anya mgbe a mụsịrị Andriy na Russia, papa ya si Ukraine kwaga na mama ya n'ụzọ zuru ezu.
Andriy Yarmolenko toro na nzụlite ezinụlọ nke ụlọ ebe anyị nwere ike iche na nne ya bụ onye na-ejikọ ezinụlọ maka ekele maka ọrụ ya na Russia. At nwere oge ụfọdụ mgbe Yarmolenko ka bụ nwata, ndị mụrụ ya tụgharịrị ebe obibi ha. Maka ụfọdụ ihe amaghi ama, ezinaụlọ ahụ laghachila n’obodo ha - obodo Chernihiv, North Ukiraine n’oge obere Andriy Yarmolenko bụ obere nwa.
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Agụmakwụkwọ football bidoro na Chernihiv, obodo dị na Ukraine bụ ebe Yarmolenko toro. N'oge ahụ, akụkọ onye Ukraine na AC Milan Andriy Shevchenko bụ onye egwuregwu ịgba egwu onye ọ bụla na-efe. Maka Yarmolenko, ọ bụ banyere ịgbaso nzọụkwụ nke arụsị ya onye dị ka n'oge ahụ na-egwu ma na-emebi ndekọ na Dynamo Kyiv.
Andriy Yarmolenko Idolized Shevchenko n'oge ọ bụ nwata. Ebe e si nweta ya Radio Free Europa
Dika obere nwa, Andriy Yarmolenko O nweghi mmasị na nchịkọta ihe egwuri egwu ọhụụ. Naanị ihe ọ chọrọ bụ bọl. Hna-ahụ maka akụkọ ịgba bọl (Andriy) dịka aha ya, ọ bụ ihe dị mma maka nwatakịrị ahụ ịhụ n'anya egwuregwu mara mma.
Dị ka n'oge edere, ncheta kachasị mma nke nwata nke Yarmolenko ka a na-echekwa dị ka egbugbu na aka ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke egbugbu Andriy Yarmolenko nke na-ese ya dị ka nwa nwoke nke nwere bọl bọọlụ na-elegharị anya na egbe.
Andriy Yarmolenko Mmụta na Ọrụ Buildup. Ebe e si nweta ya WTFoot
Yarmolenko bụ ụdị nwatakịrị ga-akpọ bọl bọl ebe ọ bụla ọ na-aga. N'ebe ndị mụrụ ya nọ, obi abụọ adịghị ya na ọ na-aga n'ụzọ ziri ezi dịka a hụrụ ya n'ọchịchọ ọ na-aga n'ihu ịmefe akara ya. Mgbe a kpọtara ya maka ịgba bọl mbụ ya, ọ theụ nke ndị mụrụ ya amaghị oke.
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Ndụ Ndụ Mmalite
Yunist Chernihiv otu klọb dị n'obodo ya nabatara Yarmolenko na usoro agụmakwụkwọ ya mgbe e nwesịrị nnwale nke ọma na ha n'afọ 2002. Onye Yarmolenko nwere oke mmasi nke nwere oke ochicho dika onye siri ike merie uzo ya ato ndi isi ntorobịa ndi ozo bu; Desna Chernihiv, Lokomotyv na Vidradnyi Kyiv n'agbata afọ 2002 ruo 2004.
N'afọ 2004, Yarmolenko mere mkpebi ịlaghachi na Chernihiv, klọb ọ malitere ọrụ ntorobịa ya n'ihi enweghị ike ya ịhapụ ntinye anụ ahụ nke ọzụzụ sitere na klọb ndị gara aga. Ọ nọrọ na Yunist Chernihiv maka oge 2 ọzọ nke hụrụ ya ka ọ na-agụsị akwụkwọ site na agụmakwụkwọ tupu ịkwaga na klọb ọzọ (Desna Chernihiv) ịmalite ọrụ ọkwa ya.
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Akpanwu akwukwo akuko
Mgbe ọ nọ na Desna Chernihiv, Andriy na-eto eto malitere ịhụ ohere nke ịgba bọl ya na Europe. Maka ya, enwere otu uzo ụzọ - ya bụ; na-agbaso usoro ọrụ nke arụsị ya - Andriy Shevchenko.
N'ihi nnukwu atụmanya e nyere ya na Dynamo Kyiv, onye ọrịa Yarmolenko kpebiri ịkwado ọrụ ya site na isonyere ndị otu ndị ntorobịa klọb akpọrọ-Dynamo-2 Kyiv. Site na nrụgide na-adịghị ala, ọ rụrụ ọrụ ya banye na otu ndị isi na klọb.
Na 11 May 2008, Yarmolenko nrọ ịkwụ ụgwọ maka ndị isi otu Dynamo mezuru. Ọ bụ ezie na ejiri ya n'aka ekpe na-eche ihu, ọ gara n'ihu ịme ihe mgbaru ọsọ 99, feat nke hụrụ ka a na-akpọ ya “Andriy Shevchenko ọhụrụ / New Sheva"Site na ndi oru nta akuko. Andriy Yarmolenko meteoric ịrị elu mere ka ọ merie ọtụtụ asọpụrụ maka klọb ahụ.
Andriy Yarmolenko tozọ na Akụkọ Ama. Ebe e si nweta ya FC Dynamo Kiev na IG
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Na-ewu ewu Akụkọ
Dị ka ọ dị na 2017 ọtụtụ klọb ndị kachasị elu nke Europe malitere itinye nrụgide na nwoke ahụ nke kpakpando n'ihi ekele ọmarịcha, gbaa na ọsọ. Ndị Borussia Dortmund meriri n'etiti ndepụta nke klọb kachasị elu na-arịọ ikpere ha ikpe maka mbinye aka ya. Yarmolenko anọghị n'ụlọ klọb ma ọ bụrụ na a na-enye m mmiri ịkwụ mmiri.
Ngwa-ngwa gaa On 11 July 2019, Yarmolenko nwere egwuregwu bọọlụ ya ugbu a na Westham FC ebe e guzobere ya na ndị otu egwuregwu ọkachasị Mark Noble - onye isi mmụọ nke klọb nke na-enye ya nri gafere ka ọ na-ebipụ ikike iji akara mgbaru ọsọ.
Andriy Yarmolenko gbara mmeri nke Westham na Mark Nobile. Ebe e si nweta ya Ihe EbereFaiti
Ọ nwere ike ọ gaghị erute ogo nke akụkọ ifo Ukranian Andriy Shevchenko, mana o doro anya na Yarmolenko bụ akụkụ dị mkpa enweghi ngwụcha usoro mmepụta nke ndị egwuregwu na-ebuso agha agha esiwo na Ukraine pụta. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Ndụ mmekọrịta
Dị ka okwu a na-aga; n'azụ nwoke na - eme nke ọma, enwere nwanyị. N'okwu a, n'azụ ụdị egwuregwu ọ bụla na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ Wag. Banyere ihe ịga nke ọma, afọ 2011, mgbe Yarmolenko meriri onye ọkpụkpọ Premier League nke Ukraine agaghị echefu echefu.
Nke a bụ afọ Yarmolenko lụrụ nwanyị enyi ya nwanyị mgbe ahụ aha ya bụ Inna. Ị maara?… Nwunye Yarmolenko bụ ọkachamara na ihe ndị si mba ọzọ, ọ bụkwa onye nduzi nke American Charity Fund. Eziokwu a na-ekpughe na ọ ma aru nke oma ma gụrụ akwụkwọ.
Zute Nwunye Andriy Yarmolenko- Inna Yarmolenko. Ekele diri IG
N'akpokoro, di na nwunye a gọziri ụmụ nwoke mara mma abụọ ndị aha ha bụ Ivan na Danylo. Ivan onye bụ ọkpara bụ onye amụrụ na ụbọchị 22nd nke May 2013. N'okpuru ebe a bụ foto nke ụmụ ha abụọ ka ha na-enwe oge dị mma na ogige.
Andriy Yarmolenko nwere ụmụ nwoke abụọ- Danylo (N'aka ekpe) na Ivan (n'aka nri)
Dịka onye nne na nna, Andriy Yarmolenko ji ụgwọ dịịrị onwe ya, ọrụ nke ịtọ ntọala maka onye ga-anọchi ya mgbe ọ bụ ụmụ ya. O nwere ike isiri ya ike ịla ezumike nká mgbe oge ruru, n'ihi ya ọ dị mkpa ịnọgide na-eburu nwa ya nwoke ọ bụla nrọ ya.
Andriy Yarmolenko na-akpụzi nwa ya nwoke bụ Ivan n'ịgbaso azụmahịa ya
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Ndụ nke Onye
Tomara Andriy Yarmolenko ndụ onwe ya pụọ ​​na egwu egwuregwu ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Na mpụga egwuregwu ahụ, Yarmolenko nwere ezigbo enyi, eccentric, nwee ume ma nwee ike imeghari ụdị ike niile gbara ya gburugburu. Ndị egwuregwu maara ya na mpụga football ga-enwe obi ụtọ na ụlọ ọrụ ya.
Tomata Andriy Yarmolenko Personal Life na egwu egwuregwu. Ekele diri IG
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Ndụ Ezinụlọ
Na mbido, ọ bụ ịkwaga Russia ịchọ maka ibi ndụ ka mma. Taa, Valentyna na Mykola nke e sere n'okpuru ebe a emeela ụzọ nke onwe ha maka nnwere onwe ego site n'aka nwa ha nwoke.
Andriy Yarmolenko ya na mama ya na papa ya. Ekele diri IG
Ọ bụ ezie na nna Andriy Yarmolenko Mykola na-agbara mgbasa ozi, otu ihe ahụ abụghị nwunye ya na nwa ya nwanyị. N'okpuru bụ foto nke Valentyna n'okpuru mbara igwe doro anya ya na nwa ya nwanyị.
Andriy Yarmolenko Mama na Nwanna Nwaanyị. Ebe E Si Nweta: IG
Oge ncheta ọmụmụ bụ oge obi ụtọ maka ezinụlọ Yarmolenko. N'okpuru ebe a bụ foto nke Yukree na nwanne ya nwoke na - amụ nwa na ụbọchị ọmụmụ ya. Nrara ọ raara onwe ya n’uche na naanị nwanne ya nwere ahụ ọfụma yiri nkwa o tinye n’olulu.
Andriy Yarmolenko Nwanna. Ekele diri IG
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - LifeStyle
N'ikpe ikpe site na aka ya na-elekọta mmadụ, ọ pụtara na Andriy Yarmolenko bụ onye maara egwuregwu ịgba ọsọ nke na-echekwa ego maka ụbọchị mmiri. Enweghị akara nke mmefu ego dị ukwuu na ibi ụdị ndụ na-adọrọ adọrọ dị ka a hụrụ site na obere ụgbọala na nnukwu ụlọ ndị mara mma.
Andriy Yarmolenko Ndụ. Ekele diri IG
Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu - Eziokwu efu
Feud Na-agba Ogologo Oge: N'ime otu egwuregwu na October 2015, Andriy Yarmolenko mere ihe ịma aka dị egwu nke ọ fọrọ nke nta ka ọ gbajie ụkwụ onye ọkpọ Shakhtar Donetsk aha ya bụ Taras Stepanenko. Ha abụọ mekọrịtara mgbe egwuregwu ahụ ma gbanwee jerseys, mana mgbe nke a gasịrị, Yarmolenko tụbara uwe Stepanenko na ala ka ọ na-ekele ndị egwuregwu Dynamo. Ọzọ, na egwuregwu ọzọ, Yarmolenko gbara Stepanenko ama ama onye ọkpụkpọ Shakhtar susuru baajị ya ama na ọfụma n'ihu ndị egwuregwu Dynamo n'oge mmeri 3-0 nke otu ya.
Esemokwu ha butere n'ọgba ọgụ n'etiti ndị otu ahụ na oge ụfọdụ, ọ dị ka ndị otu mba Ukranian niile nọ na agha. Kedu ihe kpatara ndị otu Ukranian? ọ bụ n'ihi na nnukwu Euro 2016 dabere na ndị egwuregwu sitere na Dynamo na Shakhtar Donetsk. Ihe nzuzu a bidoro site na ndị egwuregwu abụọ ahụ chọrọ itisa mba atụmatụ Euro 2016 ruo mgbe ndị egwuregwu abụọ a na-ese n'okpuru ga-eme udo, na-etinye obodo ha n'ọnọdụ mbụ.
Andriy Yarmolenko na Taras Stepanenko kwesịrị ibute obodo ha ụzọ. Ebe e si nweta ya BBC na DailyMail
Ọnụ ọgụgụ Na-adịghị Ya Na-asọpụrụ Ya: Eleghị anya ị ga-ahụta Yarmolenko n'oge ọ nọrọ na Dortmund ma ọ bụ Westham. Mana ihe ị maghị bụ nke ahụ; Ọ bụ akụkọ ifo n’ala nna ya. Yarmolenko chịrị ndị Ukraine bọọlụ na egwuregwu Ukraine n'ozuzu ya ruo ọtụtụ afọ dị ka egosiri na nsọpụrụ ya dị ịtụnanya n'okpuru.
Andriy Yarmolenko Untold Facts- Ya ọtụtụ Sọpụrụ. Ebe E Si Nweta Wikipedia
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Andriy Yarmolenko Akụkọ nwata na mgbakwunye Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akwụkwọ akụkọ egwuregwu bọọlụ Ukraine
Marcel Sabitzer Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Aaron Connolly Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Oleksandr Zinchenko Akụkọ nwata
Bọchị agbanweela: June 17, 2020